तेस्रो विश्व युद्व बन्न सक्ने... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
तेस्रो विश्व युद्व बन्न सक्ने खतरामा अमेरिका-उत्तर कोरिया परमाणु हतियार
प्रसिद्ध जर्मन दार्श्निक इम्यानुअल कान्टले (१७२४-१८०४) आफ्नो पुस्तक ‘पर्पेचुअल पिस’ मा बिश्व शान्ति सद्भावका लागि प्रत्येक देशको सरकार जिम्बेवार हुनपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्।
कुनै पनि देशको संबिधान वा सरकारलाई अन्य देशको सरकारले दखल दिन नहुने कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनको उक्त विचारको प्रभाव आधुनिक युरोप, अमेरिकालगायत विश्व प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पर्दै गयो। यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा अमेरिकी पोलिसी ‘जोज क्यनिंग’ र विदेश नीति ‘लर्ड पाल्मस्टन’ हो।
सन् १९४० को दशकमा कान्टको बिचारलाई संयुक्त राष्ट्र संघमासमेत सामेल गरिएको छ।
पछि १९ औ सताब्दिमा जर्मन दार्श्निक कार्ल माक्सको उदयपछि, उनले विश्वलाई श्रेणी बिहिन समाज (साम्यवाद) को सिद्दान्तको अबधारणा स्थापित गरे। त्यसपछि, विश्व दोस्रो बिश्व युद्धसँगै राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा विभाजित हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ। दोस्रो विश्व युद्धसँगै हामी सम्पूर्ण मानवजातिको आपसी सद्भाव, एकता र हिंसारहित समाजको कल्पना गर्दै सयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो।
सन् १९४८ मा विश्व समुदायले विश्वब्यापी मानव अधिकारको अवधारणा ल्यायो। यसमा सम्पूर्ण मानब जातिहरुको मानब अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। यस अनुसार नै सन् १९६६ मा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एबम साँस्कृतिक हकको ग्यारेन्टी हुने भनि स्पस्टसँग सयुक्त राष्ट्र संघको चाटरमा उल्लेखित छ।
दोस्रो विश्व युद्वको ठूलो मात्रामा आम नरसंहार भएको थियो। जर्मन शासक हिटलर, इटालियन शसक मुसोलिनी, जापानी शासक, त्यस समय युद्ध अपराधमा दोषी ठहरिए। जब संयुक्त सुरक्षा फौजबाट जर्मन शासक हिटलर पराजित भए, त्यसपछि बिश्व समुदायले अन्तरास्ट्रिय अदालत न्युरेबर्ग ट्रायल स्थापना गरि युद्द अपराध गरेको दोषी ठहरिएका हिटलरको ’नाजी’ पार्टीका सदस्यहरुलाई उनीहरुले गरेको अपराध अनुसार सजाय सुनाइयो। हिटलरले सम्पूर्ण यहुदी लगायत आफ्ना बिरोधिहरुको क्रुरता पुर्बक दमन गरेका थिए। तर उनले भने सजाय पाउनु अगाबै आत्मा हत्या गरेका थिए।
पहिलो विश्वयुद्धमा युरोपका दुई देशबीचको लडाइँमा दुनियाँका सबै शक्तिशाली राष्ट्र सहभागी भए । दुनियाँ बाडिँयो र थुप्रै मरे । २०औँ शताब्दीको सुरुआतमा जर्मनी एक ठूलो शक्तिका रुपमा थियो । युरोपमा अस्ट्रिया उसको एक्लो सहयोगी थियो । अस्ट्रियाबाट केही व्यक्ति सर्बिया जान चाहन्थे र यस क्रममा बोनिस्याको राजधानी साराजेवो गएका अस्ट्रियाका राजकुमार आर्कडयुक फ्रान्ज फर्डिनान्ड र उनकी पत्नीको हत्या भयो । अस्ट्रियाले हत्याका पछाडि सर्बियाको हात रहेको बतायो । अस्ट्रियाले हत्याको छानबिन सर्बियालाई नै गर्न दिएर उसलाई अल्टिमेटम दियो । सर्बियाले चेतावनी अस्वीकार गर्दै हत्याको छानबिनमा इन्कार गर्यो । त्यसपछि २८ जुलाईमा अस्ट्रियाले सर्बियामा हमला गर्यो । अस्ट्रिया जर्मनीको दममा लडेको थियो र रुसले सर्बियालाई साथ दियो । रुसले आफ्नो सेना पठायो र जर्मनी लडाइँमा होमियो । रुस जर्मनी लड्न थालेपछि रुसको सहयोगी फ्रान्स पनि लडाइँमा सहभागी भयो । फ्रान्स र जर्मनीको सीमामा लडाइँ सुरु भयो । यसबीच रुस र फ्रान्सको सहयोगी बेलायतले जर्मनीलाई लडाइँ रोक्न माग गर्यो । जर्मनीले मानेन र बेलायतले पनि जर्मनीमाथि हमला सुरु गर्यो । त्यतिबेला सबैभन्दा बलियो जलसेना मानिने बेलायती जलसेनाले जर्मनीमाथि हमला गर्यो । अमेरिका यो युद्धमा सहभागी भएन । आखिर जर्मनी र अस्ट्रिया अर्थात् धुरी राष्ट्रको हार भयो ।
तेस्रो विश्व युद्को सम्भावना
एकातिर उत्तर कोरियाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध जारी छ, राष्ट्र संघले पटकपटक उत्तर कोरियाविरुद्ध प्रतिबन्ध थप्दै र कडा बनाउँदै लगेको छ । अर्कोतर्फ उत्तर कोरियाले मिसाइल परीक्षण पनि जारी राखेको छ ।उत्तर कोरियाले एक शक्तिशाली मिसाइल जापानमाथि प्रहार गरेको थियो । पछाडी लगत्तै उसले फेरि हाइड्रोजन बम परक्षण गरेर बिस्व समुदयालाई एक पटक फेरि परमाणु युद्द हुन सक्ने धम्किपूर्ण चेतावनी दियो . यसै महिनाको सुरुमा उत्तर कोरियाले सफल इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको थियो । उसले उक्त मिसाइल अलास्कासम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको भएको दाबी गरेको थियो ।
हाल सयुक्त रास्ट्र संघमा सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपले किम जोङ्ग उनलाइ ’रकेट मेन ’ को संज्ञा दिदै उसले तत्काल परमाणु कार्यक्रम नरोके अमेरिकाले उसलाई धोव्स्ता पार्ने चेतावनी दिए . प्रतिउतर दिदै नर्थ कोरियाले अठारौ सताब्दिमा प्रयोग हुने डोटार्ड(कम्जोर बृद्ध ) सब्दको प्रयोग गर्दै र्ट्रपको भनाइलाई आत्माघतिहुने चेतावनी फर्काएको छ । यस संगै अहिले बिस्व दुइ परमाणु हतियार सम्पन्न रास्ट्रको टक्करमा अन्धकारको बादल भित्र मडारिएको छ ।
सताब्दी लामो दुस्मनी
यदि उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनको युद्द चल्यो भने उनले एक घण्टाभित्र हजारौं मिसाइल प्रहार गर्न सक्नेछन् र उनको पहिलो टार्गेट दक्षिण कोरियाको राजधानी सोल हुनेछ । जसका कारण सोलमा रहेका साढे २ करोड मानिसको हताहती हुन सक्छन । युद्ध यतिमै समाप्त हुनेछैन । विगतका वर्षहरुमा झैँ अमेरिकाले सत्तामा किमलाई बस्न दिने छैन र यसले उक्त प्रायद्वीपमा लामो समयसम्म तनाव जारी रहने छ र अन्त्यहिन संघर्षमा कोरियाली प्रायदिप फस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
अमेरिका र उत्तर कोरियाका पछिल्ला कार्यलाई नियाल्दा यी दुइ देश एक अर्का बिरुद्द सैन्य कारबाहीको लागि तयारी थालेको प्रस्ट नै छ । अहिले , अमेरिकी युद्धपोत र पनडुब्बि जहाजहरु उत्तर कोरिया नजिकै आफ्ना सहयोगी को साथमा हतियार सहित पुगिसकेको छ भने उत्तर कोरिया पनि युद्धको लागि तम्तयार भएर बसी सकेको छ ।विश्वका यी दुई परमाणु हतियार सम्पन्न आमने सामने रहेसंगे युद्दको बादल कोरियन पेनेंसुलामा मडारिन थालेको छ । यदि कुनै देशको रास्ट्रपति बाट फिंगर प्रिन्ट दबाए संगै बिसाल परमाणु हरु एक अर्कामा बज्री करोडौ मानिसहरु भकाभक हुने निश्चित प्राय नै छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइ . एस . को विरूद अफगानिस्तानमा भीमकाय नन न्यूक्लियर बम हमला लाइ लिन सकिन्छ । हालकै अबस्थामा यी दुइ देस बीच लडाई भै हाले विश्वका अन्य देस समेत यस युद्दबाट छिप्न सक्ने वाला छैनन र दुइ देसबाट सल्किएको आगो पुरै बिस्वमा सल्किने छ र यसको डडेलोले बिस्वल्लाई कप्लक्कै निल्न सक्ने छ ।
अहिले विश्वका कुल ९ देसहरु संग परमाणु हतियार रहेका छन् । जस मध्ये अमेरिका(४५७१ ), रूस (४५०० ), फ्रांस(३०० ), चीन(द्दटण्), यूके (१७५ ), पाकिस्तान(१४० ), भारत (११० ), इजराइल (८० ) र नर्थ कोरिया रहेका छन् ।
अंग्रेजी मीडियाको एक रिसर्चको अनुसार अमेरिका र रूसको परमाणु हथियारको कुल शक्ति ट,टण्ण् मेगाटन रहेको छ । जुन , सुर्यको पृथिबीमा एक मिनेटमा प्राप्त हुने उर्जाको दस भागको एक भाग हो . यदि अमेरिकाको सब भन्दा सक्तिसाली परमाणु हथियार बि (८३ को प्रयोग भएमा पहिलो २४ घण्टामा ज्ञद्ध लाख मानिस सखाप हुने छन् । साथै , यसबाट निस्कने ले रेडिएशनबाट १३ किलोमीटर रेडियसमा ३७ लाख मनिष घाइते र अंग भंग हुने छन् ।
यदि , रूसको सबभन्दा ठुलो परमाणु हतियार ’तसार बोम्बा’ को प्रयोग भएमा लगभग ४२ लाख मानिस को तत्काल मृत्यु हुने छ । साथै ७६ लाख मानिस अपाङ्ग र घाइते हुने छन् र यसका रेडिएशन बाट ७८८० किलोमीटरसम्म नोक्सान पुर्याउन सक्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ९, २०७४, ११:११:००